Prof. Yaxye: Waxaan Mahadcelin u jeedinayaa Ardayda soomaaliyeed ee Turkiga wax ku barata. - Latest News Updates
Waxaan uga mahad celinayaa ardayda Somaliyeed ee wax ku barata dalaka turkiga, Maalintii aan imid oo aad Airporka Istanbol iga soo qaadeen illaa maalintii 8aad ee aad igu soo sagootiseen Airporka, marna la ima cidleeyn, weliba waxa ay aheed markii isagu keeyna horeeysay ee aan nolosha ku kulano.
Waxaa kale oo aan ka mahad celinayaa, Hadiyada xushmo aqooneedka ay i siiyeen ardayda iyo jaamacaduba , inkasta oo aanan Gaarin heer aqoon la igu xushmeeyo.
Ma hilmaamayo doodihii aan qaarkiin wadaagnay iyo sida aan u kala faa’iideeynayee “post war & economic recovery” ma hilmaamayo Istanbul Kultur University, East African Association for Development and Research iyo Ardayda wax ku barato magaalada Istanbol.ma hilmaamayo in aad ii suura galiseen in aan booqdo gooba badan oo taariikhi ah.
waxaan ka xumay in uu baaqaday Aqoonwadaagii aan ku balansaneeyn 7/10/2017 arrima farsamo oo la xiriiray qolkii shirka lagu qaban lahaa, waxaana uga cudur daarayaa arrinkaa dadkii lagu casuumay. Ma hilmaamayo ardaydii ay ka midka ahaayeen: Cabdinur, Cabdiweli, Jaamac, Cabdigafar iyo Safiyo.
Ugu dambeeyn,Waxaan u mahad celinayaa guud ahaan Ardayda somaliyeed ee wax ku barata dalka turkiga ,in kasta oo ayna ii suura galin in aan wada tago Jamacadaha oo ku kala yaal magaalooyin badan.
Adinkana waxaan idinkula dardaarmayaa, yaan la hilmamin balamadeenii badnaa oo ay ka mid ahaayeen in wax barashada lagu dadaalo lagana faa’iideeysto fursadaha aad heeysataan hadda oo aad dhalinyartihiin,dalka in loo soo noqdo, daacad loogu shaqeeyo,howl kasta oo aad dalka u qabaneeysid dar ALLA u qabo, diinta islaamka , akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee somalinimadu ka muuqato in aan laga tagin iyo in waalidka baari loo ahaado.